Zvikanganiso zvishanu paunenge uchichengeta mbatatisi | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Hazvifananidzi kuti mbatatisi inonzi chechipiri chingwa. Mhuri dzakawanda dzinochengeta dzinenge mabhegi mashoma emiriwo ino inonaka yechando. Ndezvipi zvikanganiso zvinofanirwa kudzivirirwa kuti mbatatisi ifadze nekuravira kwayo kusvika pakukohwa kunotevera?
Unogona kuchengeta chero akasiyana
Maiwe, izvi zviri kure nemhosva. Hazvina mhosva kuti vatengesi vangani vanotivimbisa zvakasiyana, yekutanga-yekucheka mhando haina kukodzera kwekuchengetedza kwenguva yakareba. Mbatatisi tubers dzeidzi mhando dzinokurumidza kuvharwa nezvimera. Mbeu dzakatsemuka hadzigone kushandiswa sechikafu. Naizvozvo, zviri nani kunakidzwa nekuravira kwekutanga mbatatata kuibva kana zhizha, uye neyekuchengetera nguva yechando, tenga mbatatisi neinononoka kuibva nguva.
Kwekuchengetera, unogona kutenga mbatatisi dzemhando yepasi
Pfungwa isingazivikanwe. Asi mumakore akaonda kana kana vakapa mbatatisi pamutengo wakaderera, zvinoitika kuti uedzwe, mutariro yekuti mbatatisi dzakadaro dzinobudirira munguva yechando. Asi uku kutambisa mari. Chese hutano, yakakwirira-mhando tubers inonyatsochengetwa. Usati waisa mbatatisi, dzinofanira kuve dzakarongedzwa uye dzakaomeswa. Bvisa mbatata dzose dzakapambwa. Kana zvisina kudaro, kurwara kana kuora panguva yekuchengetedza kunozokanganisa uye kukanganisa iyo yakasara.
Joint yekuchengetera mimwe miriwo nembatatisi zvisina kunaka
Mbatatisi inogona uye kunyange kuve yakakosha kuchengetedza nema Beets. Iyi midzi yezvirimwa inobvisa zvakakwana unyoro uye ma tubers haaore. Kugoverwa kwakagoverwa kunobatsira kune maviri mbatatisi uye beets.
Nzvimbo dzisina kukodzera
Varidzi vane runyararo rwevasori nemapellars vane rombo rakanaka, asi vanhu vetaundi vanozotarisira nzvimbo yekuchengetedza chaiyo. Ingoisa bhegi rematatata pane iyo loggia kana mhanza haina kushanda. Munguva yechando, machubhu anozotonhora, mbatatisi inozoravira zvinotapira uye inotanga kutadza. Kuti uzvichengete pane loggia uye pamhanza iwe uchafanira kutenga bhokisi rakagadzirwa-rakagadzirwa kana riite rako pachako. Yepamba bhokisi remiriwo rinotaridzika zvakanaka, rinogona kupendwa mune chero ruvara. Kupenda kuchapa kudzivirira kubva mukunyorova. Bhokisi rakapetwa kaviri, izvi zvinoshanda kune zvese pasi uye chifukidziro. Pakati pemukati nekunze siya nzvimbo isina chinhu padyo ne5 cm.Iri huchizadzwa ne sawdust kana polystyrene.
Mbatatisi haidi kurongedzwa
Nguva dzinoverengeka panguva yemwaka, zvinodikanwa kuti uparure kuburikidza nembatatisi, uchibvisa mabota akasvibiswa uye ayo akarara pedyo navo. Zvirinani kushandisa nguva kurongedza pane kubvumidza kuti kuwanikwa kwese mbatatisi kupere.
Maitiro ekuchengeta mbatatisi kusvika kuchirimo
Mbatata Ndeipi nguva yekuchengetedza mbatata?
Ndeipi nyika inonzi ndiyo nyika yefranc fries?
Ndeipi hupenyu hwesherefu hwemazai ehuku kana yakagadziriswa?
Mbatatisi dzakakora here?
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 0,566 masekondi.